Krakow ayaa martigelin doonta 2022 Congress International iyo Ururka Ururka Shirarka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Booland News » Krakow ayaa martigelin doonta 2022 Congress International iyo Ururka Ururka Shirarka
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Booland News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Shirweynaha ICCA ee 2022 wuxuu sidoo kale ku beegmi doonaa sannad -guurada 10aad ee xubinnimada Kraków ee Golaha Caalamiga ah iyo Ururka Shirarka (ICCA).
Shirweynihii 61aad ee ICCA 13-16 Noofambar 2022, ayaa xubnaheeda geyn doona magaalo ku taal bartamaha Yurub oo sidoo kale ah xarunta dhaqanka, farshaxanka iyo sayniska caalamiga ah.
Kraków, Poland waa meel lagu baadho qarniyo badan oo taariikhda ah oo ay weheliyaan dahabka dhismaha casriga ah.
Kraków wuxuu si cad u muujinayaa sida ay uga go'an tahay laba ka mid ah qiyamka asaasiga ah ee ICCA: wada shaqaynta iyo isku duubnida hal -abuurka.
61-aad Golaha Caalamiga ah iyo Shirka Caalamiga ah (ICCA) Congress-ka 13-16 Noofambar 2022, ayaa xubnaheeda geyn doona magaalo ku taal bartamaha Yurub oo sidoo kale ah xarunta dhaqanka, farshaxanka iyo sayniska caalamiga ah. Kraków, Poland waa meel lagu baadho qarniyo badan oo taariikhda ah oo ay weheliyaan dahabka dhismaha casriga ah. Sannad kasta magaalada si sahlan loo heli karo waxay soo dhaweyneysaa dhacdooyin badan oo muhiim u ah dhaqanka iyo tacliinta, iyo sidoo kale shirarka ganacsiga.
2022 The ICCA Koongarasku wuxuu sidoo kale ku beegmi doonaa sannad -guurada 10aad ee CracowXubinnimada Ururka Caalamiga ah iyo Ururka Shirarka (ICCA). Wadashaqeyntu waxay fure u ahayd koritaanka Kraków ee sii socda iyo guusha ilaa tobankii sano ee la soo dhaafay.
Tusaale ahaan, KRAKÓW NETWORK wuxuu isu keenaa ku dhawaad ​​400 oo qof, oo matalaya ku dhawaad ​​200 oo hay'adood wuxuuna ka kooban yahay 5 kooxood oo waxbarasho ah. Dhanka kale, Kraków Future Lab ayaa loo xilsaaray inuu shirarka u soo dhawaado teknolojiyada dhacdooyinka cusub. Shabakado iskaashi oo xooggan ayaa la dhisayaa ma aha oo kaliya gudaha laakiin sidoo kale qaran ahaan, oo ay ku jiraan Xafiiska Shirweynaha Poland ee Ururka Dalxiiska Poland, Xafiisyada Golaha Gobolka ee 16, ururrada warshadaha qaranka, xulafada goobta, iyo ka -qaybgalka Barnaamijka Danjiraha Congress -ka. Kraków sidoo kale wuxuu xubin ka yahay Suuqgeynta Magaalooyinka Yurub.
"Cracow wuxuu si cad u muujinayaa sida ay uga go'an tahay laba ka mid ah qiyamka asaasiga ah ee ICCA: wada shaqaynta iyo isku duubnida hal -abuurka. Sababtan awgeed, magaaladu waxay ahayd doorasho cad oo loogu talagalay shirweynaha sannadka dambe. 2022-ka wufuudda Koongareeska ICCA waxay filan karaan waayo-aragnimo kulan oo aan kala go 'lahayn oo isku daraya goob heer caalami ah iyo urur dhacdooyin heer sare ah, "ayuu yiri Madaxa ICCA Senthil Gopinath.
ICCA Wakiilada Congress -ka ayaa ku kulmi doona Xarunta Congresska ICE Kraków, calanka ganacsiga iyo dhaqanka magaalada. Si ku habboon xarunta, waxay martigelisay dhacdooyin badan oo heer caalami ah oo kala duwan sida kalfadhigii 41aad ee UNESCO Guddiga Adduunka 15aad Shirweynaha Adduunka ee OWHC iyo shir sannadeedka Dhaqaalaha Furan ee Indhaha.
“Shirweynaha ICCA waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan warshadaha shirarka adduunka. Sannad kasta waxay isu keentaa ku dhawaad ​​kun khabiir oo khibrad u leh abaabulka shirarka caalamiga ah iyo shirarka: meelaha, goobaha, PCO -yada iyo ururada. Poland ayaa martigelin doonta markii ugu horreysay, taas oo dhinac ahaan caddeynaysa mowqifka hadda jira, ee hore u bislaaday ee warshadeena, dhanka kalena waxay abuurtaa fursado waaweyn oo horumarkeeda sii kordhaya ”ayuu ku nuuxnuuxsaday Duqa Kraków Jacek Majchrowski.
“Iyada oo heerarka tallaalka ay sii kordhayaan oo adduunkeennu uu bilaabayo inuu si tartiib tartiib ah mar kale u furmo, waxaan ku faraxsanahay inaan aragno soo noqoshada dhacdooyinka qof ahaaneed. Krakow waxay bixisaa goob kulan oo ay heli karaan xubno badan oo ka tirsan ICCA magaaladuna waxay shaki la'aan soo bandhigi doontaa waxa ugu wanaagsan ee warshadeenu ay u fidin karto shirarka ururrada caalamiga ah, ”ayuu yiri Gopinath.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 27
شات عراقنا شات صوتي شات ذهب